Maqaalka Rasheed Ahamed ee Martech Zone |
Maqaallada by Rashiid Axmed
Rasheed Ahamed wuxuu u shaqeeyaa sida Leading Organic Grow at Si toos ah, Inc. Automatad waa aalado warbaahin dhijitaal ah oo la yiraahdo Co, oo bixisa xirmo xalal lacag-helineed oo barnaamij ah oo kaxeeya hufnaan iyo lacag-sarreyn heer sare ah. Adoo adeegsanaya barnaamijkeena madbacadaha dhijitaalka ah ayaa abuuri kara, lacag samayn kara isla markaana wax ka tari kara khibrada ugu wanaagsan ee xayeysiiska.
Maxay yihiin Qiyaasaha Xayeysiiska Muujinta CTR-ga ugu sarreeya iyo Muuqaalada?
Arbacada, Agoosto 12, 2020 Arbacada, Agoosto 12, 2020 Rashiid Axmed
Suuqgeeye, xayeysiisyada la bixiyay ayaa had iyo jeer ahaa isha lagu kalsoonaan karo ee helitaanka macaamiisha. In kasta oo habka ay shirkadaha u adeegsadaan xayeysiinta lacag bixinta ah ay ku kala duwanaan karaan - qaarkood waxay u adeegsadaan xayeysiis dib u habeyn, qaarna wacyigelin sumadeed, iyo qaar kaligood la wareegis ah - midkeen kasta oo ka mid ah waa inuu si uun ugu lug yeeshaa. Iyo, indho la'aanta / indho la'aanta xayeysiiska, ma fududa in la qabsado dareenka dadka isticmaala xayeysiiska muujinta ka dibna la helo